10:24 AM चलचित्रहरु No comments
10:14 AM चलचित्रहरु No comments
बाँकी अंश यता ▶▶▶
7:36 AM सूचना प्रबिधि No comments
बुखारेस्ट, रोमानिया, पुस २९ गते : रूस महासंघका लागि नेपाली राजदूत डा. रबि मोहन सापकोटा आज बिहान रोमानियाको राजधानी बुखारेस्ट आईपुग्नु भएको छ। उहाँले पर्सि माघ १ गतेका दिन रोमानियाका राष्ट्रपति त्रैयाँन बसेस्कू समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको कुरा नेपाली राजदूताबास मस्कोले जनाएको छ। रूस महासंघको मस्को स्थित नेपाली राजदूताबासले सह प्रमाणीकरण भएका मुलुकहरू तथा आबश्यक परेको समयमा हेर्ने भनिएका छिमेकी मुलुकहरू मध्ये रोमानिया पनि एक हो। महामहिम राजदूत डा. रबि मोहन सापकोटाज्यूको बुखारेस्ट स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल हेनरी क्वान्दमा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद रोमानियाका अध्यक्ष नवराज पोखरेलले हार्दिक स्वागत गर्नु भएको थियो । नेपाल र रोमानिया बिचको मैत्री सम्बन्ध सन १९६८ को अप्रिल २० तारेखदेखि शुरू भएको हो। हाल सम्म दुबै राष्ट्रहरू बीच मैत्री सम्बन्ध कायम भएता पनि कुटनैतिक संस्थाको स्थापना नभएको कारणले मस्को स्थित नेपाली राजदूताबास मार्फत नेपाल रोमानिया बीचको मैत्री सम्बन्ध कायम हुदै आएको छ भने नयाँ दिल्ली स्थित रोमानियाली राजदूताबास मार्फत
7:56 AM चलचित्र समाचार No comments
मनोज दाहाल काठमाडौं, मंसिर २२
यो सहरमा उनी एउटी सामान्य युवती हुन्। एमबिए अन्तिम सेमेस्टर पढ्दै गरेकी सामान्य युवती। स्कुटीमा साधारण मास्कले धुलोधुँवा रोक्न खोज्दै सहरमा हुइँकिने युवती। स्मार्टफोनमा फेसबुक र ट्विटरबाट देशविदेशका सानाठूला गतिविधि नियालिरहन्छिन्। बेलाबेला स्टाटस अपडेट गरिरहन्छिन्। बजारमा के नयाँ किताब आयो भनेर इन्टरनेट ब्राउजमा हराइरहन्छिन्। सहरको एउटा कुना आरुबारीस्थित उनको घरबाट बुद्धनगरस्थित कलेजमा बिहान साढे छ बजेको क्लास भ्याउन उनलाई कम्तीमा पाँच बजे उठ्नुपर्छ। सलमान खान उनका प्रिय नायक हुन्। माधुरी दीक्षित प्रिय नायिका। अरु युवतीभन्दा अलिकति फरक के भने उनको कपाल रेशमी छ। अलिकति फरक के भने स्कुल पढ्दासम्म उनी कक्षामा जहिल्यै फस्ट हुन्थिन्। त्यसपछि एमबिएसम्मै पनि राम्रो नम्बर ल्याइरहेकी छिन्। अलिकति फरक के भने नाच्न मन पराउँछिन्। अभिनय गर्न मन पराउँछिन्। एक महिनापछि उनको छैटौं फिल्म रिलिज हुँदै छ। चार महिनापछि उनको एमबिए सकिँदैछ। अर्को केही महिनापछि उनका अरु दुई फिल्म आउँदै छन्। मिल्यो भने केही महिनापछि उनी आगामी पढाइबारे सोच्दै गरेकी हुनेछिन्। ... दस वर्षअघि एसएलसीमा ८६ प्रतिशत ल्याएकी केकी अधिकारीका लागि जीवनमा पढाइ सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। ‘म पढ्न रुचाउने एउटी सामान्य युवती हुँ,’ मंसिरको एउटा घमाइलो दिनमा कफी पिउँदै केकी गफिइन्, ‘मेरो बेन्चमेट र मेरो फरक केमात्र हो भने ऊ बैंकमा काम गर्छे, म फिल्ममा।’ ‘फिल्ममा
स्तनले मसाज गर्छिन यी महिला..!
4:04 AM स्वास्थ्य/यौन No comments
तपाइँ यस कुराले अचम्मित हुन सक्नुहुन्छ कि एक जना महिला आफ्ना स्तनका माध्ययमले मसाज गर्दछिन । सुन्दा अचम्म लागेपनि यो सत्य कुरा हो । ३४ बर्षकी क्रिस्टी लभ अटलान्टामा यो अनौठो सेवा आफ्ना ग्राहकहरूलाइ उपलब्ध गराइरहेकी छन । क्रिस्टी एक सर्टीफाइड मसाज थेरापिस्ट पनि हुन र उनको स्तनको साइज ४८ एनएन रहेको छ । एक जानकारी अनुसार क्रिस्टी सामान्य र सेक्सुअल दुबै तरिकाले मसाज गर्दछिन । सेक्सुअल मसाजमा उनी आफ्ना क्लाइन्ट्सको शरीरका फरक फरक भागहरूमा आफ्ना ठुला ठुला स्टनलाइ रगड्दछिन, जसका लागी उनी ३०० डलर प्रतिघण्टा शूल्क लिन्छिन । अहिले सम्म मसाजको काम गर्दा उनले आफ्ना क्लाइन्ट्सका अगाडी आफ्ना स्तन पूर्ण रूपमा खोलेकी भने छैनन । बासतबमा ब्यूटी स्कूलको पढा़ई सकिएपछि उनलाइ कसैले काम दिएनन । किन भने उनको स्तनको साइज ठुलो भएका कारण उनले जागिर पाउन सकिनन, त्यसपछि उनले आफ्ना
Rhythm - New Nepali Full Movie
9:54 AM चलचित्रहरु No comments
5:07 AM स्वास्थ्य/यौन No comments
महिलाको वक्षस्थल एक महत्वपूर्ण प्रजनन अंग मात्र होइन सुन्दरताकेा प्रतिक पनि मानिन्छ । त्यहीँ भएर होला महिलाहरु आफ्नो वक्षस्थलको सुन्दरताप्रति निकै सजग हुन्छन् । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ । केही समय पहिले एक विदेशी अनलाइनले गरेको सर्भेक्षणले एउटा अनौठो तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अनुसार ७४ प्रतिशत पुरुषहरुले जब महिलालाई हेर्छन् तब उनीहरुको पहिलो नजर महिलाको अनुहारमा पर्छ । त्यसपछि गर्दन र त्यसपछि वक्षस्थलमा पर्छ । यहाँ महिलाको वक्षस्थल सम्बन्धि अन्य केही रोचक प्रसँग समावेश गरिएको छ । महिलाको अन्तरवस्त्र बिक्रि गर्ने कम्पनी इन्टीमेसीद्धारा गरिएको सर्भेका अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो खास वक्षस्थलको साइज भन्दा १ वा २ इन्च ठूलो ब्रा लगाउँछन् । ८५ प्रतिशत महिलाले गलत साइजको ब्रा लगाउँछन् ।इन्टरनेशनल जर्नल अफ सेक्सुअल हेल्थको सर्भेक्षणका अनुसार ७० प्रतिशत युवतीहहरु आफ्नो वक्षस्थलको आकारबाट असन्तुष्ट छन् । सन् २००६ मा गरिएको एक सर्भेक्षण